ထိပ်တန်း Cryptocurrency ပွဲစား5ခု ဇူလိုင်လ 2022 - အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
မှတ်စု: Cryptocurrency ပွဲစားများသည် UK တွင် စည်းကမ်းမဲ့စွာ လုပ်ကိုင်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် သင်သည် CFD ထုတ်ကုန်များမှတစ်ဆင့် cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရှာဖွေနေပါက ပွဲစားများသည် FCA သို့မဟုတ် CySEC ဖြင့် လိုင်စင်ကိုမကြာခဏကိုင်ဆောင်ထားမည်ဖြစ်သည်။
ဥရောပရှိ CBI နှင့် MiFID မှ ကွပ်ကဲသည်။
CFD များသည် ရှုပ်ထွေးသော တူရိယာများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အရင်းအနှီး လျင်မြန်စွာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ မြင့်မားသည်။ လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအကောင့်များ၏ 71% သည် ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် CFD များကို ရောင်းဝယ်သောအခါတွင် အရင်းအနှီးဆုံးရှုံးသည်။ CFDs များ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို နားလည်သည်နှင့် သင့်အရင်းအနှီးဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် မြင့်မားသောအန္တရာယ်ကို တတ်နိုင်မလား။
သင့်အား ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာရှိသော cryptocurrency မြင်ကွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။
နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ၏ အစုအဝေးများကို ပံ့ပိုးထားသည်။
CFDs မှတဆင့် cryptocurrencies အတိုချုံ့နိုင်မှု။
Cryptocurrency ပွဲစားများသည် 24/7 အခြေခံပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။
ထိပ်တန်းပလက်ဖောင်းများက သင့်အား မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သင်၏အထောက်အထားကို အတည်ပြုနိုင်စေပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခကြေးငွေတွေက ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်လာတယ်။
အချို့သော cryptocurrency ပွဲစားများကို FCA မှ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
Cryptocurrencies သည် အန္တရာယ်များသော ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ပွဲစားအများအပြား ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရသည်။
အချို့သော cryptocurrency ပွဲစားများသည် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းမဲ့ပုံစံဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြသည်။
သင့်အတွက်ရရှိနိုင်သောဒုတိယရွေးချယ်စရာမှာ cryptocurrency CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အခြား CFD ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပင် စတော့ရှယ်ယာ, ညွှန်းကိန်းနှင့် ကုန်စည်အရင်းခံ cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုကို သင်ပိုင်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား သင်သည် စျေးကွက်များ မည်ကဲ့သို့ သွားမည်ကို မှန်းဆနေခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်။
🥇 PayPal က.
🥇 International Wire ။
cryptocurrency ပွဲစားသည် 1% ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်ကိုကောက်ခံသည်ဟုဆိုကြပါစို့။
£500 တန်​ဖိုးဝယ်​ချင်​တယ်​ Bitcoin.
သင့်အား ကော်မရှင်ခ £5 (£1 ၏ 500%) ကောက်ခံပါမည်။
သင်၏ Bitcoin ကို £750 တန်ဖိုးရှိသောအခါ သင်ရောင်းလိုပါသည်။
သင့်အား ကော်မရှင်ခ £7.50 (£1 ၏ 750%) ကောက်ခံပါမည်။
Bitcoin တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် သင်သည် cryptocurrency CFD ပွဲစားကို အသုံးပြုသည်။
Bitcoin ၏ 'ဝယ်' စျေးနှုန်းသည် $10,000 ဖြစ်သည်။
Bitcoin ၏ 'ရောင်း' စျေးနှုန်းမှာ $10,100 ဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းနှစ်ခုကြား ကွာခြားချက်မှာ 1% ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ အရင်းကျေရန် အနည်းဆုံး 1% အမြတ်ရရန် လိုအပ်ပါသည်။
မှတ်စု: cryptocurrency CFD ပွဲစားအများစုသည် သင့်အား ကော်မရှင်အခမဲ့အခြေခံဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်ပေးဆောင်ရမည့် တစ်ခုတည်းသော အခကြေးငွေမှာ ပျံ့နှံ့မှုဖြစ်သည်။.
🥇 Bitcoin ငွေ.
🥇 ကြယ် Lumens.
🥇 Binance အကြွေစေ့.
သင်သည် Bitcoin ၏ ပရိတ်သတ်တစ်ဦးမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို အတိုချုံးရောင်းချရန် CFD ပွဲစားကို အသုံးပြုရန် သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Bitcoin သည် အကြွေစေ့တစ်ခုလျှင် ပေါင် 5,000 ဖြင့် လက်ရှိစျေးနှုန်းရှိသည်။
သင်သည် စုစုပေါင်းရှယ်ယာ £1,000 ဖြင့် 'ရောင်း' မှာကြားသည်။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Bitcoin သည် စျေးကွက်များတွင် စတင်ရောင်းချလာပြီး အကြွေစေ့တစ်ခုလျှင် ပေါင် 4,000 တန်နေပြီဖြစ်သည်။
၎င်းသည် 20% တန်ဖိုး လျော့ကျမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။
သင့်အမြတ်အစွန်းများကို သော့ခတ်ရန် သင်ဆုံးဖြတ်သည်၊ ထို့ကြောင့် အရောင်းအ၀ယ်မှထွက်ရန် 'ဝယ်သည်' အမိန့်ကို ချမှတ်ပါ။
သင်၏ £200 ရှယ်ယာ၏ 20% ကို အခြေခံ၍ စုစုပေါင်း £1,000 အမြတ်ရခဲ့သည်။
Leverage 2:1 တွင်၊ သင်သည် သင့်အကောင့်တွင်ရှိသော ပမာဏထက် နှစ်ဆ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ £500 ၏လက်ကျန်တစ်ခုသည်သင့်အား £1,000 တန်သော cryptocurrencies များကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
သင့်ကုန်သွယ်မှုသည် 50% (1/2) ထက်ပို၍ ကျဆင်းသွားပါက၊ သင့်ကုန်သွယ်မှုသည် ပြေလည်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် သင်၏ပေါင် 500 အနားသတ်တစ်ခုလုံးကို ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။
500:1 တွင်၊ သင်၏ cryptocurrency ပွဲစားအကောင့်တွင် သင့်တွင်ရှိသည်ထက် အဆ 500 ပိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ £500 ၏လက်ကျန်တစ်ခုသည်သင့်အား £250,000 တန်သော cryptocurrencies များကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဒါက မင်းရဲ့အမြတ်တွေကို 500x တိုးစေလိမ့်မယ်။
မှတ်စု: Leverage သည် သင်အသစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါက ရှောင်ရှားသင့်သည့် အန္တရာယ်များသော ကုန်သွယ်မှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဤသည်မှာ မတည်ငြိမ်မှု မြင့်မားလေ့ရှိသော cryptocurrency လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအရာအားဖြင့်အမှားများရှိပါကမည်သည့်နေရာမှလှည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သတင်းကောင်းမှာအချို့ပွဲစားများသည်ယူကေနှင့်လိုင်စင်ယူထားသည် FCA or CySEC ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် တချို့ကျတော့လည်း လိုင်စင်ကိုင်ထားတယ်။ ASIC သြစတြေးလျတွင်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကဏ္multipleပေါင်းစုံတွင်စည်းမျဉ်းကြီးကြပ်မှုကြီးကြပ်မှုရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
မှတ်စု: CFD cryptocurrency ပွဲစားတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် တူညီနေသော်လည်း၊ သင်၏ဒင်္ဂါးပြားများကို ထုတ်ယူရန်အတွက် အောက်ပါအဆင့်ကို လိုက်နာရန် မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှု၏ အနာဂတ်စျေးနှုန်းကို မှန်းဆနေရုံမျှဖြင့် ဒင်္ဂါးပြားများ မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သင်သည် သင်၏ဒင်္ဂါးများကို သီးသန့်တစ်ခုသို့ ထုတ်ယူသင့်သည်။ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်. ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုသွားပြီး သင့်ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာကို ကူးယူလိုက်ပါ။ သင့်ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာတွင် ကူးထည့်ကာ ငွေထုတ်လိုသည့်ပမာဏကို ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် ပွဲစားတွင် ငွေထုတ်ရန် ရွေးချယ်ပါ။ အကြွေစေ့များသည် သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ 1 နာရီအတွင်း ရောက်ရှိသင့်သည် - ပွဲစားက ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် အချိန်မည်မျှကြာသည်အပေါ် မူတည်သည်။
ဒါကြောင့်ယခုသင် cryptocurrency ပွဲစားအတွက်ထွက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်အဘယ်အရာကိုအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါ, ယခုကြှနျုပျတို့ 2022 XNUMX ၏ထိပ်တန်းပလက်ဖောင်းငါးခုစာရင်းပြုစုသွားကြသည်။ ဤပွဲစားများအားလုံး In-house ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးခဲ့ကြသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်သူများ, ဒါကြောင့်အောက်ပါပလက်ဖောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းကျပ်သောစံကိုက်ညီကြောင်းစိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေ။